Diyaarad nooca wax basaasa ah oo ku soo dhacday Duleedka Deegaanka Buulo-Mareer
May 28, 2013 - Written by Editor
Marka:-Wararka naga soo gaaraya deegaanka Buulo-Mareer ee Gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in diyaarad nooca wax basaas ah ay ku soo dhacaday maanta duleedka degmada Buulo-Mareer. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo Wareysi siiyey Idaacadda VOA ayaa sheegay diyaaraddu ku dhacday deegaanka Buulo Mareer oo ay haatan gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in laga yaabo in iyagu rideen diyaarada.
Diyaaradaha Drone-ka loo yaqaan ee aan duuliyaha wadin ayaa waxay aad ugu soo bateen dalka Soomaaliya iyada oo xitaa lagu arkayo deegaano ka fog goobaha ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab.
Illaa iyo hada ma cada halka laga leeyahay diyaaradan ku dhacday saaka duleedka degmada Buulo-Mareer balse waxaa inta badan adeegsada diyaaradaha Drone-ka loo yaqaan ciidamada dalka Mareykanka iyaga oo ku dilay gudaha Soomaaliya Saraakiil ka tirsan Ururka Al-Qaacida Sida Saalix Nabhaan iyo Bilaal Birjaawi alaha u naxariistee.
Deegaanka Buulo-Mareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa lagu xasuustaa dagaalkii ay ciidanka Faransiiska rabeen in ay ku soo furtaan saraakiil ka tirsan Sirdoonka dalkooda oo ay heysteen Al-Shabaab taas oo ay ku Fashilmeen.